Ndeipi kutora katsi | Noti Katsi
Nguva yekutora kati
Tiri kurarama munyika umo, zvinosuruvarisa, kune vakawanda, vanhu vazhinji vanosiya katsi dzavo. Kunyangwe zvave nekuda kwekuti vanofamba kana nekuti havachadi kuvachengeta, dzimba dzekugara dzemhuka dziri kuramba dzichiwedzera kuzara nehunhu hunokosha hunowanikwa izvo zvavanongoda imhuri inozvichengeta sezvavanokodzera.
Kana iwe urikufunga kuwedzera mhuri yako uye uchida kuziva nguva yekutora kati, verenga kuti uwane ndeipi nguva yakanakisa yekutora huni kupinda mumba mako.
1 Zvinhu zvekuita usati wagamuchira
2 Ndeipi kutora katsi?
Zvinhu zvekuita usati wagamuchira
Zvakawanda sekuda kwaunoita katsi, zvakanyanya, zvakakosha kuti, usati waita sarudzo, iwe ita zvinhu zvakateedzana kuitira kuti, kana nguva yasvika, iyo furry nyowani mufaro wevose:
Taura nenhengo dzese dzemhuri yakoUnganai mutaure nezvazvo, muone zvamunofunga nezve zano. Kuunza mhuka kumba uko kune mumwe munhu asingade mvere dzemvere hazviwanzo kufamba zvakanaka.
Gadza miganhu kubva pakutangaKatsi isati yatombosvika pamba, mhuri yese inofanirwa kubvumirana kuti irege ichipinda pamubhedha here kana kurara nemunhu. Dzidzo yekatsi inowira pavanhu vakuru, asi vana vanofanirawo kuita zvavo kuitira kuti vasavhiringidza mhuka 🙂.
Tenga zvese zvaunoda: Kana munhu wese abvuma kuti inguva yekukura mhuri, ichave nguva yekuenda kunotenga. Nhengo nyowani inoda munhu anonwa uye anonwa, chinotsvaira, matoyi, mubhedha netireyi yemarara, pamwe nechikafu chisina zviyo, yakachena, mvura nyowani, uye jecha rekatsi.
Ndeipi kutora katsi?
Kana zvese zvagadzirira kumba, ichave nguva yekuenda kunotora kati. Asi zvirokwazvo, chii chiri nani, kutora katsi kana katsi yakakura? Ichokwadi ndechekuti zvinoenderana. Kana paine mhuka pamba, chinhu chakanakisa kuita kutora katsi sezvo zvichizodhura zvakanyanya kushomeka.
Zvino, kana pasisina furry uye mhuri yakadzikama (uye ichida kuramba yakadaro), chinhu chakanakisa kusarudza katsi yevakuru, nekuti ine hunhu hwakaumbwa uye haizopedza zuva ichimhanya, asi newe uchikumbira kutapirirwa.
Tinovimba matipi aya anobatsira kwauri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Kugamuchirwa » Nguva yekutora kati
Zvekuita kana katsi yangu ine kurwadziwa nemudumbu
Kubatsira sei katsi kuuya kumba